Baolina kitra - "CAN 2021" :: Maniry ny hilalaovan’ny Barea any Toamasina i Nicolas Dupuis • AoRaha
Baolina kitra – « CAN 2021 » Maniry ny hilalaovan’ny Barea any Toamasina i Nicolas Dupuis
“Faniriako ny hanaovana ny lalaon’ny Barea any amin’ny kianjan’i Barikadimy, Toamasina”, hoy i Nicolas Dupuis, mpanazatra nasionalin’ny ekipa Malagasy taranja baolina kitra na ny Barean’i Madagasikara, raha nivahiny tamina onjam-peo tsy miankina iray teto an-drenivohitra, omaly. “Miankina amin’ny federasiona malagasin’ny baolina kitra (FMF) ihany anefa ny fanapahana izany”, hoy hatrany ity teknisiana frantsay ity.
Hampiantrano lalao roa i Madagasikara amin’ny fifanintsanana hiadiana tapakilan’ny fiadiana ny amboaran’i Afrika na ny CAN 2021. Hatao amin’ny faran’ny volana marsa ho avy izao ny lalaontsika sy i Côte d’Ivoire, raha amin’ny faran’ny volana aogositra no handraisan’i Madagasikara an’i Nizera. Raha ny vokatra hatramin’izao dia i Madagasikara no mitana vonjimaika ny laharana voalohany, taorian’ny nandresentsika an’i Etiopia (1 – 0) sy Nizera (6 – 2). Eo anelanelan’ireo fampiantranoana lalao roa ireo dia mbola hanafika any Etiopia sy Côte d’Ivoire isika, amin’ny 23 marsa sy amin’ny 1 jona.
Kianja roa, Barikadimy Toamasina sy Vontovorona Antananarivo, no nambaran’ny federasiona fa hisafidianana hanaovana ny lalao hihaonantsika amin’i Côte d’Ivoire amin’ny faran’ny volana marsa. Tafiditra amin’ny andro fahaefatra amin’ny fifanintsanana hikatsahana tapakilan’ny Can 2021 ity lalao ity. Somary lehibe kokoa, miohatra amin’ny an’i Vontovorona, ny kianjan’i Barikadimy. Afaka mampivelatra ny lalaony kokoa ny Barea, amin’ny kianja lehibe, araka ny fahatsapan’ny mpanazatra nasionaly Malagasy.
Fiainana klioba :: Horaisin’i Rôrô an-tanana ny AS Adema
Fampandrosoana ara-toekarena :: Mampirisika ny fanomezana tosika ny fambolena ny Banky iraisam-pirenena